Virus (2020) | MM Movie Store
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ကိုလီကိုးနဲ့ မလာပူရမျဆိုတဲ့ မွို့နှဈမွို့မှာ လူသားတှရေဲ့အသကျကို ခွိမျးခွောကျတဲ့Nipah အမညျရဗိုငျးရပျဈ လူတှကေို စတငျကူးစကျ လာတယျ…အဲ့ဒီဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရသူတှကေ အဆကျမပွတျအော့အနျကွတယျ…အာရုံခံစနဈတှေ ပကျြဆီးတယျ..အခြိနျအနညျးငယျကွာပွီးနောကျ သဆေုံးသှားကွတယျ…
ကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့လာပွီး အသပြေောကျမြားလာတဲ့အခွအေနအေရကွောငျ့အစိုးရက ကြောငျးတှေ၊စြေးတှကေို ပိတျ၊ ယာဉျကွောတှေ လြှော့ခပြွီး ကာကှယျမှုတှပွေုလုပျခဲ့တယျ…
ဆိုးကြိုးကတော့ ပွညျသူတှေ စီးပှါးရေး ထိခိုကျကွတယျ…
ဒီဗိုငျးရပျဈအတှကျ ကာကှယျဆေးလညျး မရှိသလို ကုသမှုမှတျတမျးလညျး ဘာတဈခုမရှိတဲ့အတှကျ ဆရာဝနျတှလေညျး ခေါငျးခွောကျရတယျ….တဈဖကျမှာလညျး ဒီဗိုငျးရပျဈကို ဓာတျခှဲခနျးစမျးသပျထားတဲ့ဗိုငျးရပျဈဆိုပွီး နိုငျငံရေး စှပျစှဲခကျြတှေ ရှိလာတယျ…
ဗိုငျးရပျဈရဲ့ဇာဈမွဈကို ရှာတှမှေ့ ကုသနိုငျမှာ ဖွဈလို့ အိန်ဒိယနိုငျငံက ဆရာဝနျတှေ ဘယျလို ပူးပေါငျးပွီးအဖွရှောကွမလဲဆိုတာကိုတော့….
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကိုလီကိုးနဲ့ မလာပူရမ်ဆိုတဲ့ မြို့နှစ်မြို့မှာ လူသားတွေရဲ့အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့Nipah အမည်ရဗိုင်းရပ်စ် လူတွေကို စတင်ကူးစက် လာတယ်…အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေက အဆက်မပြတ်အော့အန်ကြတယ်…အာရုံခံစနစ်တွေ ပျက်ဆီးတယ်..အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သေဆုံးသွားကြတယ်…
ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်လာပြီး အသေပျောက်များလာတဲ့အခြေအနေအရကြောင့်အစိုးရက ကျောင်းတွေ၊ဈေးတွေကို ပိတ်၊ ယာဉ်ကြောတွေ လျှော့ချပြီး ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်…
ဆိုးကျိုးကတော့ ပြည်သူတွေ စီးပွါးရေး ထိခိုက်ကြတယ်…
ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကာကွယ်ဆေးလည်း မရှိသလို ကုသမှုမှတ်တမ်းလည်း ဘာတစ်ခုမရှိတဲ့အတွက် ဆရာဝန်တွေလည်း ခေါင်းခြောက်ရတယ်….တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေး စွပ်စွဲချက်တွေ ရှိလာတယ်…
ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဇာစ်မြစ်ကို ရှာတွေ့မှ ကုသနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လို ပူးပေါင်းပြီးအဖြေရှာကြမလဲဆိုတာကိုတော့….
Ex – Link 3